Dutchtown CID သတင်း• Dutchtown CID •ဒတ်ခ်ျတောင်းရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်
၂၀၂၀ ဘဏ္fiscalာရေးနှစ်တွင် Dutchtown CID သည် CID ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်စဉ်ကချမှတ်ထားသောရည်မှန်းချက်များအကောင်အထည်ဖော်ရန်ထပ်မံအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခဲ့သည်။ COVID-2020 သည်ရပ်ရွာနှင့်နီးကပ်စွာဆက်ဆံနိုင်သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကိုအမှန်ပင်အကျိုးသက်ရောက်သည်၊ သို့သော် CID နှင့်အခြား Dutchtown အဖွဲ့အစည်းများသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည် ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နေထိုင်သူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်၍ အစေခံရန်။
အစီရင်ခံတင်ပြချိန်တွင် Dutchtown CID သည်ထိုဒေသရှိအလယ်တန်းကင်းလှည့်မှုများကိုကန့်သတ်ထားသည့် Campbell Security နှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် CID သည်ကင်မရာစနစ်များနှင့်အခြားနည်းဗျူဟာများအပါအ ၀ င်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ပေးမည့်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေလျက်ရှိသည်။
Beautification နှင့် Maintenance
CID သည်ခရိုင်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အထပ် ၃၀ ပေါင်းအိုးအိမ်များတွင်စွန့်ပစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန် Metro Sweeping နှင့်ဆက်လက်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်စိန့်ပက်ထရစ်စင်တာနှင့် CID ၏ကန်ထရိုက်စာချုပ်သည်အလုပ်သမားများကိုယေဘုယျသန့်ရှင်းရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်ကူညီသည်။
အဆိုပါ CID နှင့်အခြားရပ်ကွက်အတွင်းအဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းခဲ့ကြသည် Dutchtown ဂုဏ်ယူပါတယ် စီမံကိန်း။ ထိုစီမံကိန်းတွင်ရပ်ကွက်အတွင်းရှိအိမ်နီးချင်းများအားခြံဝင်းသင်္ကေတများပေးခြင်းနှင့်ပိုမိုအားကောင်းသောအသိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ရန်ကူညီခဲ့သည်။ CID သည် DutchtownSTL.org နှင့်လည်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးလိုအပ်ချက်များအတွက်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသည်။
Dutchtown CID သည်အခြား Dutchtown အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုဆက်လက်ကျယ်ပြန့်စေသည်။ 2020 ခုနှစ်တွင် CID နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် DT2 • Downtown Dutchtown နှင့်မစ်ဆူရီ Main Street's UrbanMain ပဏာမခြေလှမ်း အသစ်တည်ထောင်ရန် Dutchtown ကော်မတီများ ၎င်းသည်အရေးပါသော CID ခြေရာနှင့်အတွင်းရှိစီမံကိန်းများအပေါ်အာရုံစိုက်သည်။ ကျနော်တို့အမြဲတမ်းစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်အသိုင်းအဝိုင်း၏သွင်းအားစုကိုသုံးနိုင်သည်။ စဉ်းစားပါ ကော်မတီတစ်ခုသို့ဆက်သွယ်ခြင်း CID နှင့် Dutchtown ရပ်ကွက်တို့၏အနာဂတ်ကိုလမ်းညွှန်ရန်!
အောက်မှာ Filed ဒိန်းမတ်. အမျိုးအစားအားလုံးကိုပြပါ. DT2, ဒိန်းမတ်, Dutchtown CIDနှင့် UrbanMain. အမျိုးအစားနည်းနည်းပြပါ.
ဒီ post ကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဒီ post ကိုနောက်ဆုံးပေါ် update လုပ်ခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ 19th, 2021 .